I-Phenolic Resin, i-Phenol Formaldehyde Resin, I-Powder Phenolic Resin - Zetian
I-phenolic resin yezinto zokwakha eziboshiwe
I-phenolic resin yezinto zokwakha
I-Phenolic resin ye-resinated textile felts kanye ne-automotive trim
I-Hebei Zetian Chemical Co., Ltd. (eyayiyi-Hebei Longgang Industry and Trade Co., Ltd.), eyasungulwa ngo-1991, itholakala ku-Hengjing Road ohlangothini olusentshonalanga lomgwaqo uLantian, i-Circular Economy Park, i-Hengshui Industrial New District, esifundazweni sase-Hebei. , ehlanganisa indawo ecishe ibe ngamahektha ayi-100.
Le nkampani inohlelo oluphelele lokuphatha ikhwalithi, imishini yokukhiqiza ezenzakalelayo esekela abantu abadala.
i-phenolic resin ye-break pas material
I-Phenolic resin ye-resinated textile felts kanye ...
Le nkampani ikalwe njengebhizinisi "elikhethekile, elikhethekile nelisha" nguMnyango Wezimboni Wesifundazwe sase-Hebei. Ngo-2017, yaqashelwa njengebhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu, futhi yalinganiswa njengebhizinisi elincane neliphakathi nendawo elisekelwe kubuchwepheshe nguMnyango Wesifunda Sesayensi Nobuchwepheshe wase-Hebei, futhi yakhipha isitifiketi esincane sezobuchwepheshe.
Le nkampani igxile kubantu, ihlonipha ulwazi, ihlonipha amakhono, isebenzela injabulo yabasebenzi, futhi ibamba iqhaza ngenkuthalo ezenzweni zezenhlalakahle zomphakathi. Endleleni efanele, sizokwenza lokho esingakwenza ukuze sizenzele thina, abanye, kanye nomphakathi, futhi sijabulele injabulo.
imiphumela engcono kakhulu
Sineqembu lochwepheshe le-R & D kanye nethimba elihle kakhulu labadayisi, usuku lonke ukuze likunikeze isevisi yokulinda.
Ngomugqa womhlangano othuthukile wamazwe omhlaba kanye nobuchwepheshe bokukhiqiza, uhlelo oluqinile lokulawulwa kwekhwalithi.
Ihlanganisa indawo ecishe ibe ngamahektha ayi-100. Ngokuphuma kwamathani angu-60,000 kanye nenhloko-dolobha ebhalisiwe yama-yuan ayizigidi ezingu-93.05.
Itholakala kuHengjing Road ohlangothini olusentshonalanga loLantian Street, Circular Economy Park, ezokuthutha zilula.
Siphikelela ezimfanelweni zemikhiqizo futhi silawula ngokuqinile izinqubo zokukhiqiza, esizibophezele ekwakhiweni kwazo zonke izinhlobo.
Imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle kanye nesikweletu esisenza sikwazi ukumisa amahhovisi amagatsha amaningi nabasabalalisi ezweni lakithi.
Indlela yokwelapha i-phenolic resin yamanzi angcolile
I-Phenolic resin ingenye yezinto ezibalulekile zokusetshenziswa ezimbonini ezifana nama-brake pads nama-abrasives. Amanzi angcolile akhiqizwa ngesikhathi sokukhiqizwa kwe-phenolic resin kuyinkinga enzima kubakhiqizi. Amanzi angcolile okukhiqizwa kwe-phenolic resin aqukethe ukugxila okuphezulu kwama-phenols, ama-aldehydes, ...
Ukusetshenziswa kwe-phenolic resin embonini ye-refractory
Imboni ye-refractory idinga i-phenolic resin njenge-ejenti yokubopha, futhi phakathi kwama-ejenti amaningi okubopha, i-phenolic resin kuphela iyisinqumo esihle esinomphumela omuhle. Uma njengamanje usebenza embonini ye-refractory, uma ungakakhethi i-phenolic resin njenge-binder, uma ufuna ukuqhubeka ...
Indlela yokuvimbela izingozi ekusetshenzisweni kwamasondo okugaya i-resin
Isondo lokugaya i-resin iyithuluzi lokugaya elisetshenziswa kakhulu. Ivamise ukwakhiwa ngama-abrasives, ama-adhesives kanye nezinto eziqinisayo. Ukuphuka ngesikhathi sokusebenza ngeke nje kubangele ukufa noma izingozi ezinkulu zokulimala, kodwa futhi kuzodala umonakalo omkhulu endaweni yokusebenzela noma egobolondweni. Ukuze unciphise futhi ulawule ...
Le nkampani igxile kubantu, ihlonipha ulwazi, ihlonipha amakhono, isebenzela injabulo yabasebenzi, futhi ibamba iqhaza ngenkuthalo ezenzweni zezenhlalakahle zomphakathi.
I-Circular Economy Park ohlangothini olusentshonalanga lwe-Blue Sky Avenue, i-Heng Jing Road eNingizimu ye-Hengshui City, esifundazweni sase-Hebei, e-China